Linux 5.0 rc6 munzira yekuenda kune yakasununguka kuburitswa ... | Linux Vakapindwa muropa
Linux 5.0 rc6 munzira yekuenda kune yakasununguka kuburitswa ...
Linus Torvalds yazivisa iyi nyowani Regedza Musarudzo 6 yeiyo nyowani Linux kernel 5.0. Iyo purojekiti iri kunanga kune yakajairwa kuvhurwa sezvo Linus yanyatsoratidza muchirevo. Sekutaura kwaakaita, havasi kuve nematambudziko akawandisa uye hapana kana chimwe chinhu chinoshamisa, saka vari kusangana nezvinotarisirwa panguva iyoyo. Zvakare, Linus yakaburitsa pachena kuti Linux 5.0 rc6 yakati kurei kupfuura zvaaizoda uye zviri mhedzisiro yeshanduko dzavakaita kuzvikamu.
ari nhau kana budiriro yakaitwa mune ino kernel, sekufunga kwangu semazuva ese. Mune zvese zvirinani kana zvishoma zvakafanana, kururamisa kwemamwe madhigi, kuvandudzwa kwevatyairi, nezvimwe. Pane ino chiitiko, chakashanda zvakanyanya ndeye network, ese ari maviri madhimoni uye epakati, inomiririra ingangoita kota yeshanduko yakazara yeRC6. Asi handicho chete chinhu chakaitwa ...
Basa rakaitwawo pane zvimwe zvinhu zvakaita se vatongi GPU, DMA, IIO, kurira, USB, MISC, uye yakareba etc. Saizvozvowo, pakave nekuchinja mune chimwe chikamu chakakosha, zvivakwa semazuva ese. Iyo kodhi inoreva nezvezvivakwa ndiyo inosarudzira hunhu uye kugadzirisa kwema microprocessors anoshanda pasi peLinux, saka zvinonyanya kukosha kuti iwe uuchengete.
Pakati pe architectures ayo akave akavezwa akave ARM, MIPS, x86, uye PowerPC. Saizvozvowo, chimiro cheFS chakashandawo kugadzirisa zvese zvine chekuita nefaira masisitimu eedu ekuchengetedza midhiya. Uye iyo kernel pachayo ndeimwe yeayo protagonists maererano nebasa revanogadzira tsanga. Sezvo Linus akataura zvakanaka muLKML, «[..] hapana cheicho chinoratidzika kushamisa kana kutyisa. Ini ndinofunga isu tichiri munzira yekuenda kune yakasarudzika kuvhurwa."...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux 5.0 rc6 munzira yekuenda kune yakasununguka kuburitswa ...